Yusuf Garaad: Ma Dastuurkaa khaldan?
Ma Dastuurkaa khaldan?
Dadka qaar waxay qabaan in mugdi ku jira Dastuurku uu sabab u yahay ra’yi kala duwanaanta marar badan soo dhex gashay Madaweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha tan iyo 2004. Oo waxay leeyihiin Dastuurka waa in wax laga beddelaa oo la kala caddeeyaa labada Xafiis mid walba awooddiisa iyo soohdintiisa.
Qaar Dastuurka diyaarintiisa mas’uuliyad ku lahaana waxay ku doodayaan in Dastuurku aanuu ahaan mid wax walba si cad u qeexaya laakiin uu tilmaan uun bixiyo waa mid loogu tala galay. Ujeeddada laga leeyahay ayaa ah, bay qabaan, in meelaha uu mugdiga Dastuuriga ahi ka jiro loo baahan yahay in Madaxda sare ay wadahadal ka galaan oo go’aammo ay isla oggol yihiin ay ka gaaraan ayaga oo hadba xaaladda u fiirinaya. Sidaa darteed waxay qabaan in aan wax laga beddelin ilaa afti loo qaado.
Waxay intaa ku darayaan, in maaddaama dagaal sokeeye laga soo baxay oo loo baahan yahay in kalsooni la abuuro, in aan awood buuxda hal mas'uul gacanta loo gelin karin, ee loo baahan yahay is afgarad in lagu gaaro wadahadal.
Adiga maxay kula tahay?
Fadlan marka aad ra'yi dhiibaneyso, ha ka fekerin Madaxweyne Xasan Shiikh iyo Ra'iisal Wasaare Cabdiweli Shiikh iyo midka aad taageersan tahay sabab kasta ku raace.
Hana ka fekerin Madaxdii hore isu qaban jirtay. Isku day in aad ka fekerto labada Xafiis adiga oo aan midna magac ku dul qorin. Sidee shaqo ku socon kartaa? Maxaase dalka u dan ah? Iyo su'aalo kuwaas la nooc ah ah is weydii.
Fadlan aragtidaada ku qor qeybta hoose ee isla boggan, haddii aad karto.
Posted by Yusuf Garaad at 07:16:00
Golaha Wasiirradu maxay Galabta ka hadleen?
Guddoomiye Jawaari: Uma hakaneyno
Xariifnimada Xisaab ayaa ka dambeyn
Isrogrogga Shibbanayaasha Soomaaliga
Ebola Allow naga ilaali
Isbeddel adigu inta aadan isbeddel rajeyn
Soohdimaha Federaalka - Hakad mise Joogsi?
Madaxweyne ma isaga guurnaa?